सत्तागठबन्धन चुनाव अगावै भताभुंग हुन लागेकै हो ? एमालेलाई कसले दियो यति गम्भीर सूचना ? — Imandarmedia.com
सत्तागठबन्धन चुनाव अगावै भताभुंग हुन लागेकै हो ? एमालेलाई कसले दियो यति गम्भीर सूचना ?
काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तागठबन्धन भत्किन लागेको सूचना पाएको संकेत गरेको छ। ज्ञवालीले स्थानीय चुनावमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु एकतावद्ध हुने अवस्था नभएको बताएका हुन्।
भित्रभित्रै पहिरो जाने अवस्था भएपछि निर्वाचनबाट पराजित हुने डरले सत्तारुढ दलहरु आफैं अत्तालिएको उनको तर्क छ। ठबन्धनमा पहिरो जान सुरु गरिरहेको अवस्था छ। श्रोतका अनुसार दलहरुले भित्र-भित्रै आन्तरिक सर्कुलर जारि गरि सकेका छन्।
नेकपा एमाले चितवन–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरु तलसम्मै एकतावद्ध भएर जाने अवस्था नरहेको जिकिर गरे।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले हामीलाई अप्ठयारो पार्छ कि भन्ने खालको जुन मनावैज्ञानिक दवाव सिर्जना गर्न खोज्याछन। त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन म सबै कमरेडहरुलाई आग्रह गर्दछु’ उनले भने।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, उनीहरुले जतिसुकै प्रयास गरेपनि गठबन्धन तलसम्म एकतावद्ध गरेर लैजाने अवस्था छैन। यही कारणले उनीहरु अत्तालिएका छन्। तर जतिसुकै गरेपनि उनीहरुले यो गठबन्धनलाई तलसम्म एकतावद्ध बनाएर लैजाने अवस्था छैन।
गठबन्धनमा पहिरो जान सुरु गरिरहेको अवस्था छ। उपमहासचिव ज्ञवालीले सबै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राजनीतिक, नैतिक तथा गणितीय रुपमा पनि जित हासिल गर्ने निश्चित भएको भन्दै सोही अनुसारको तयारीमा जुटन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। गठबन्धन नै भत्किन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै कांग्रेस बैठकमा प्रश्न उठेको हो।
नेपाली कांग्रेसमा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा उमेदवार चयन गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको छ।
शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उमेदवार चयनको मापदण्ड, चुनावी तालमेललगायत विषयमा छलफल भएको नेता एनपी साउदले जानकारी दिए। धेरै कुरामा छलफल भयो।
महानगर र उपमहानगरमा कसरी उमेदवार चयन गर्ने भन्ने छलफल भयो, उनले भने।पार्टीको केन्द्रीय समितिले चुनावी तालमेलसम्बन्धी निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले तालमेल स्थानीय आवश्यकताअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
स्थानीय समितिहरूले त्यो आवश्यकतालाई सबभन्दा राम्रोसँग बुझ्छन्। माथिबाट निर्णय लाद्नु हुँदैन, उनले बैठकमा भनेका थिए। नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने निष्पक्ष, पारदर्शी र उपयुक्त ढंगले उमेदवार चयन गर्नुपर्ने बताए।
उमेदवार चयनका विषयमा पार्टीभित्र सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।गठबन्धन आफ्नो ठाउँमा, तालमेल आफ्नो ठाउँमा छँदै छ। सबभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ता र नेतृत्वले सहमति खोज्ने कि विनाश रोज्ने भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले बैठकमा भनेका थिए, निष्पक्ष, पारदर्शी र उपयुक्त ढंगले चयन गर्ने कुरातिर केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले चुनावी तालमेलका विषयमा प्रस्ट खाका आउनुपर्ने भन्दै तालमेलको निश्चित मापदण्ड के हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए। धेरै ढिलो नगरौँ।
हरेक तहमा सहमतिपूर्ण निकास निकाल्नका निम्ति कार्ययोजना र निश्चित मापदण्ड चाहिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भइसकेको भन्दै सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको नेता साउदले जानकारी दिए।